Arovy ny rindranasa Android arakaraka ny toerana misy anay | Androidsis
Hexlock, fampiharana hiarovana ny fampiharana Android mifanentana amin'ny sensor sy ny mombamomba ny dian-tanana
Fangatahana ho an'ny arovy ny rindrambaiko napetraka ao amin'ny Androids anay Betsaka ny ao amin'ny magazay ofisialin'ny fangatahana ho an'ny Android, na dia misy kalitao sy toetra mampiavaka azy toa izay hatolotro anao anio aza, azo antoka fa vitsy dia vitsy ny manolotra antsika izay atolotray antsika hexlock maimaim-poana tanteraka.
hexlock dia fampiharana izay hanampy antsika hiaro ireo rindranasa izay napetrakay amin'ny terminal Android anay koa amin'ny alàlan'ny modely mamoha, teny miafina na koa amin'ny alàlan'ny mpamaky ny rantsantanana, izay misy fiasa vaovao ahafahantsika mamela ny mombamomba azy tsirairay avy arakaraka izay mahaliana antsika ary arakaraka ny toerana misy antsika amin'izany fotoana marina izany noho ny fifandraisana Wi-Fi nifandray taminay. Avy eo, amin'ny fipihana eo «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity», hiditra amin'ny rohy fisintomana ianao ho an'ny Hexlock, ilay fampiharana izay asehoko anao amin'ny antsipiriany tanteraka amin'ilay horonantsary mifatotra izay nanombohanay ity lahatsoratra ity.
1 Inona no natolotr'i Hexlock, fampiharana mba hiarovana ny fampiharana antsika?
2 Misintoma Hexlock maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Inona no natolotr'i Hexlock, fampiharana mba hiarovana ny fampiharana antsika?
hexlock manolotra antsika na mihoatra noho ny kely noho ny fahefana arovy ny rindranasa napetrakay amin'ny terminal Android anay amin'ny alàlan'ny fampiasana lamina mamoha mba hidirana amin'ny rindrambaiko voaaro, tenimiafina na amin'ny alàlan'ny mpamaky ny rantsantanan'ny fitaovantsika Android aza.
Tsy toy ny fampiharana hafa amin'ny fomba izay manana fampiasa mpampiasa tena tsotra sy safidy voafetra voafetra, farafaharatsiny amin'ireo kinova maimaim-poana amin'ity karazana fampiharana ho an'ny Android ity. Amin'ny hexlock Tsy izany no izy satria manana interface tsara sy maoderina mpampiasa izahay ary tsotra ihany koa ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa, izay hahafahanay sakano ireo rindranasa mahaliana antsika arakaraka ireo mombamomba izay noforoninay manokana ary mahaliana antsika sy ny filanay manokana.
Ity fiasan'ny mombamomba ny mpampiasa mamela antsika hamela profil samihafa miaraka amina fampiharana samihafa isaky ny mombamomba izay noforoninay teo aloha. Noho izany, amin'ny fisafidianana ny mombamomba an'i I miasa o Casa, afaka manakana ny rindranasa isika ka angatahana lamina hamaha, fidirana amin'ny teny miafina na ny dian-tananay, hahafahantsika miditra amin'izy ireo raha vantany vao ny fampiharana dia mahatsikaritra fa nifandray tamin'ny tambajotra Wi-Fi voalaza etsy ambony isika any amin'ny toeram-piasana na tranonay.
Raha tsy ampy izany, dia ampianay ny fahafahan'ny fampiharana manome antsika, miditra amin'ny faritra nantsoina vaovaon'ny media ho afaka sakano ny sarinay sy ny horonan-tsarinay manolo-tena bebe kokoa amin'ny alàlan'ny famohana ny lamina, ny teny miafina na amin'ny alàlan'ny rantsan-tànana, tsy isalasalana fa miatrika ny iray amin'ireo rindrambaiko fiarovana tsara indrindra izahay mba hisorohana ny fidirana tsy ara-dalàna amin'ireo rindranasa napetrakao amin'ireo terminal Android anay.
Raha te hiasa tsara ny rindranasa dia tsy maintsy avelantsika hivoaka avy eo amin'ny sehatra fidirana amin'ny manager Android fitaovana, fidirana hita ao amin'ny fipetrahan'ny terminal anay ao amin'ny faritra Security. Na iza na iza rehefa avy nanandrana ilay rindranasa ary tsy naharesy lahatra azy fotsiny na te-hamafana azy fotsiny dia tokony hiditra ny faritra fiarovana amin'ny fampiasa Android ary ajanony ny fidirana amin'ny mpitantana ny fitaovana ka afaka esorina amin'ny fomba mahazatra ny fampiharana.
Misintoma Hexlock maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Hexlock, fampiharana hiarovana ny fampiharana Android mifanentana amin'ny sensor sy ny mombamomba ny dian-tanana
CastBox, fampiharana iray izay tsy azonao adino raha manana Chromecast an'i Google ianao